Denmark oo Sharciga Deganaanshaha ka ceshatay 94 Qof oo Qaxooti Suuriyan Ah Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka DenmarkDenmark oo Sharciga Deganaanshaha ka ceshatay 94 Qof oo Qaxooti Suuriyan Ah
March 6, 2021 Wararka Denmark, Wararka Maanta Somaliska, Warka ugu akhriska badan 0
Warbixin uu daabacay wargayska Ingriiska ee Independent laba maalmood ka hor ayaa lagu sheegay in Danmark noqotay wadankii ugu horeeyey ee Yurub ah ee ka qaada qaxootiga Siiriya deganaanshaha, taas oo muujinaysa inay qasab tahay inay ku noqdaan guryahooda madama Dimishiq waxay noqotay amaan.
Wargayska ayaa sheegay in Denmark ay ka ceshatay sharciga deganaanshaha 94 qaxooti Suuriyaan ah.
Wasiirka Socdaalka ee Denmark, Matthias Tesfai, ayaa sheegay bishii la soo dhaafay in dalka Scandinavian-ka uu “furnaa oo daacad ahaa bilowgii …
Waxaan u cadeynay qaxootiga Siiriya in ogolaanshaha deganaanshahoodu yahay mid ku meel gaar ah.” Waa laga laaban karaa haddii aysan difaac u baahnayn. ”
“Waxaan siin doonnaa dadka xaqa u leh inta loo baahan yahay, laakiin marka xaaladuhu hagaagto , qaxootigii hore waa inuu ku laabto dalkiisa oo uu halkaas ka bilaabo nolosha,” ayuu raaciyay.
Tani waxay imaaneysaa iyadoo laanta socdaalka ee wadanka ay go aansatay in la balaariyo meelaha ay u aragto inay amaan tahay dalka Syria si loogu daro maamulka gobalada